Ndinonzi Shephard ndine makore 30 | Kwayedza
Ndinonzi Shephard ndine makore 30
28 Nov, 2014 - 09:11	 2014-11-27T14:57:47+00:00 2014-11-28T09:00:53+00:00 0 Views
MAKADII? Ini ndiri mukadzi ane makore 32 nemwana mumwe chete ndinotsvagawo murume ane makore 35 kusvika 40 asi varume vevanhu kwete. Ndinonamata kumasowe, nhamba dzangu 0779 649 490 asi vanoda zvekutamba kwete.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mudzimai akafirwa ane makore 41 nemwana mumwe, ndiri HIV+ uye ndinotsvaga murume ari pachokwadi anoziva Mwari ane makore 42-50. Ngaandibate pa0779 234 080.
Ndinonzi Shephard ndine makore 30 uye ndinotsvaga musikana ave kuda zvemba ane makore 19-25, akanyarara anonamata nemwoyo wese. Nhamba yangu 0782 984 937
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 23 nemwana 1 ndinotsvagawo murume anoda zvemba ane makore 25 – 30. Ndinoshanda, anoda fona pa0716 638 785.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndiri kutsvaga musikana wekudanana naye ane mwana, aine makore makore 18-20. Ndinoshanda kuEconet, handina mwana kana utachiona. Ndibatei pa0777 866 046.
Ndiri mukomana ane makore 29 ndinoda mukadzi wekuroora, nhamba dzangu idzi 0716 588 295.
Ndiri mukadzi ane makore 36 nemwana 1 ndiri kutsvaga murume ari pachokwadi asina mukadzi ane makore 38-46, anonamata. Nhamba dzangu 0735 206 376.
Ndiri murume ane makore 42 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 35 kusvika 40. Ngaave ari HIV positive uye ari muHarare. Anoda nhamba dzangu 0717 294 784.
Ndiri mukomana ane makore 25 ndinodawo musikana ane makore 23 zvichidzika. Vanodawo fonai pa0716 415 590.
Zita rangu ndinonzi brother Martin ndine makore 34, HIV negative uye ndinotsvagawo musikana wekuroora anoshuva rudo chairwo, anoda zvemba. Akagamuchira Jesu Kristu aine makore 18-25 ngaandibate pa0771 566 707.
Ndiri mukadzi ane makore 43 nevana 2, HIV negative uye ndiri kutsvaga murume ari pachokwadi anoda zvekumasowe ane mwana 1 kana 2. Anokwanisa kundichengeta anoshanda ngaandibate pa0715 009 716, paWhatsApp ndiripo.
Makadii veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 39, HIV positive uye handina mwana. Ndinodawo murume ari pachokwadi nekuti ndaneta nematsotsi. Zvakawanda tozotaura, vanoda ndibatei pa0777 515 955.
Ndiri mukadzi ane makore 26 nemwana 1 ndiri kutsvagawo murume anoda zvemba anoshanda, anotya Mwari ane makore 28 — 32 asi asina chirwere. Anoda ngaafone pa0716 406 006.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 25 ave kuda zvemusha. Ndinoshanda ndiri muHarare vanoda nezvangu fonai pa0779 151 562 kana kundibata paWhatsApp asi ndinoda vari pachokwadi chete. Ndatenda.
Makadii veKwayedza? Ndiri musikana ane makore 22 ndinotsvagawo mukomana wekuseka naye akanaka nekuti ini ndakanakawo. Vanoda kuseka neni ndibatei pa0716 416 446.
Ndiri murume ane makore 24 ndinodawo musikana wekuroora ane makore 21 zvichidzika ari mugari wekwaRusape kana Mutare. Ndinoshanda, ndibatei pa0783 784 115.
Makadini veKwayedza? Ndiri murume ane makore 32 nemwana mumwe, ndiri HIV negative uye ndinonamata Masowe eChishanu yeNguwochena. Ndinodawo mukadzi wekuroora ane makore 25 kusvika 45. Ane hunhu ngaafone pa0716 790 100.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 35 ndinotsvaga murume asina mukadzi anoda kuroora ane makore 37 kusvika 45. Ndiri HIV positive, nhamba yangu iyi 0772 714 024.
Ini ndiri mukadzi ane makore 36, HIV positive uye ndinotsvagawo murume wekufambidzana naye. Anoda nezvangu nhamba dzangu idzi 0716 596 674.
Ndiri mukomana ane makore 23 ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 21. Anoda kuroorwa nhamba dzangu idzi 0776 512 507.
Ndiri murume ane makore 25 ndinotsvagawo mudzimai akavimbika, ndinogara muHarare. Nhamba dzangu 0717 018 503.
Ndiri musikana asati ambowanikwa, ndiri HIV negative uye ndiri kutsvagawo murume abva zera ane makore 33 kusvika 50 ari pachokwadi anoda zvekuroora. Andifarira ngaandibate pa0713 931 887.
Vose vaifona pa0783 617 321 chiregai henyu ndakamuwana wandaida. Tichitenda imi veKwayedza.
Ndinotenda nerubatsiro rwenyu, ndakazowana shamwari yandaida saka vose vaifona pa0777 677 074 chiregai zvenyu.
Makaita basa nechirongwa chenyu
veKwayedza ndakazowana wangu akavimbika saka vose vachiri kufona pa0782 130 281 chiregerai.
Ndiri mukadzi ane makore 34 nevana 2, ndiri HIV positive uye ndinotsvagawo murume anoda kuroora. Vanoda nezvangu ndifonerei pa0783 959 774.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvaga mukadzi wekuroora ane makore 27 kusvika 40 akazvipira kunotorwa ropa. Ndibatei pa0782 205 029 kana kutumira sms.
Ndinonzi Shallom Sibanda, ndinobva kuMasvingo uye ndiri kutsvakawo shamwari (penpals) dzinonamata dziri pamapiritsi kuti tipangane mazano. Vakasununguka ndibatei pa0778 864 166.
Ndiri mukadzi ane makore 27 ekuberekwa ndine mwana mumwe chete uye ndiri kudawo murume ane makore 30 zvichikwira. Vanoda ndibatei pa0775 333 305.
Ndinonzi Sharai, ndaitsvaka shamwari uye ndinotenda ndakaiwana ine mazirudo saka vose vaifona pa0793 174 499 chiregerai.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 23 ndiri kutsvagawo mukomana ane makore 25 — 30. Ndibatei pa0715 983 664.
Ndiri mukadzi ane makore 42 ndinotsvagawo murume ane makore 42 kusvika 60. Nhamba dzangu 0773 047 820.
Ndiri mukadzi ane makore 37 nevana 4, ndiri HIV negative uye ndiri kutsvagawo murume wekushamwaridzana naye ane makore 45 kusvika 50. Ndinoda ari pachokwadi, anotya Mwari. Anondida ngaandibate pa0778 772 221, ndinozvishandira, matsotsi kwete.
Ndiri mudzimai ane makore 48, ndiri pamapiritsi uye ndinotsvakawo murume akaita seni ari pachokwadi ane makore 50 kusvika 55 asi kwete ane mukadzi . Andifarira ngaafone pa0717 275 356.
Ndiri mukadzi ane makore 37 ndiri HIV positive uye ndinoda murume akaitawo seni chero asingashandi. Nhamba dzangu 0717 043 485.
Ndiri mudzimai ane makore 48 nevana vaviri uye ndiri kutsvagawo murume anoda zvekuroora ari pachokwadi ane makore 50 — 60. Ngaandibate pa0772 750 822.
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinodawo musikana anoda zvekuvaka imba neni. Zvizhinji ngatibatanei panhamba dzinoti 0714 869 140.
Ndiri mukomana ane makore 24 okuberekwa ndiri kutsvagawo musikana wokuroora ari pachokwadi. Anondibata pa0734 047 496.
Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana vaviri ndinotsvagawo murume ane makore 38 – 46. Anoda zvemusha ngaafone pa0783 866 855.
Ndiri mudzimai ane makore 44 nevana 3 ndinotsvagawo murume wekudanana naye ane makore ari pakati pe45 ne55. Ndiri HIV negative, nhamba dzangu 0739 186 044.
Ndiri mukomana ane makore 26 ndichigara kwaMutoko, ndinotsvagawo musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 25. Anenge andifarira anondibata pa0771 811 359, ndinonzi Benvolence.
Ndiri mukomana ane makore 24 okuberekwa ndinotsvagawo musikana wekuroora ari pachokwadi. Ngaandibate pa0734 047 496.
Ndiri mudzimai ane makore 31 nevana 2, ndiri kutsvagawo murume wekugara naye ari pachokwadi. Ini neaimbove murume wangu takasiyana, ndiri kugara kumba kwevabereki vangu. Vanoda ngavandibate pa0733 936 665.
Makadii? Ndiri musikana ane makore 23 ndinotsvaka murume ane makore 28 kusvika 34. Vanoda zvekutamba kwete, nhare dzangu idzi 0739 378 371.